आजको सम्पादकिय बिकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष निगरानीे राखौँ – Muluki Khabar
बिहीबार, ६ गते माघ २०७८ | Thursday 20th January 2022
आजको सम्पादकिय बिकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष निगरानीे राखौँ
२०७८ पुष ४ गते, आईतवार
चालु आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा उदयपुर जिल्लाभरी बिकास निर्माणको काम के–के हुँदैछ भनेर हामी जिल्लाबासीलाई थोरैलाई मात्र थाहा हुनसक्छ । उदयपुरमा अहिले पुरानो आर्थिक बर्षको पुरा हुन बाँकी रहेको कामले पनि निरन्तरता पाईरहेको छ । उदयपुरमा अहिले बिकास निर्माण अन्र्तगत ठूला भबन, सडक, सभाहल, पुल, सडक कालोपत्रेहरु पनि बनिरहेको छ । उदयपुरको बिच भाग भएर मदन भण्डारी लोक मार्ग गएकाले पनि यो सडक अन्र्तगत उदयपुरमा मदन भण्डारी लोकमार्ग सडक खण्डमा साना ठुला २० भन्दा बढि पुलहरु बनिरहेको छ । त्यस्तै सडक कालोपत्रे बन्ने क्रम जारी छ ।
सडक निर्माण सँगै उदयपुरमा अहिले बिकास निर्माणे ठूलो भबनहरु पनि बनिरहेको छ । उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट रहेको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर १२ त्रियुगा नदि पुल नजिक त्रियुगा बसपार्कमा १२ करोड बढिको बस टर्मिनल भबन बनिरहेको छ । त्यस्तै त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर १३ पुरानो गाईघाटमा ६ करोड बढिको लगानीमा मदन भण्डारी सभाहल बनिरहेको छ । जिल्लाको उत्तरी पश्चिमी ताप्ली गाउँपालिकामा ६ करोड बढि लगानीमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक बिशाल भबन बनिरहेको छ । उदयपुर जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र कटारी नगरपालिका अन्र्तगत निर्बाचन क्षेत्र नम्बर दुईको भुभाग छुने सिद्धिचरण लोकमार्ग ७० करोड बढि लगानीमा कालोपत्रे हुँदैछ । त्रियुगा नगरपालिकाले सदरमुकाम गाईघाट आसपास तिन ठाउँमा टुक्रा–टुक्रा गरेर ४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा मर्मत सम्भार गर्दैछ । यि बाहेक उदयपुरमा बिभिन्न पालिकाहरुको भबन बन्ने क्रम जारी छ । जिल्ला भित्र हुने बिकास निर्माणको काममा थोरै मात्र उदयपुरका निर्माण ब्याबशायीले काम पाएका छन् । धेरै जसो ठुलो लगानीको आयोजना सबैभन्दा न्युन थोरै रकममा बनाउने ठेकेदारले पाउने भएकाले जिल्ला बाहिरका निर्माण ब्याबशायीले काम पाउने गरेका छन ।
जिल्ला बाहिरको निर्माण ब्याबशायीले काम पाएको खण्डमा सो आयोजनामा स्थानियको प्रत्यक्ष कडा निगरानी हुन जरुरी छ । जिल्ला बाहिरका निर्माण ब्याबशायीहरुले जसो तसो काम सक्ने उदेश्यले काम गरिरहेका हुन्छन् । आफ्नै जिल्लाबासीले आफ्नो जिल्लाको काम पाएको खण्डमा केही न केही उनीहरु आफ्नो जिल्लाको काम भएकाले गुणस्तरमा ध्यान दिन्छन् । केही जिल्लाबासी निर्माण ब्याबशायीले भने आफ्नै जिल्लाको काममा पनि गुणस्तरहिन सामान लगाउने कार्य यस अघि भएका छन् । हाम्रो समाज, आफ्नो टोल, गाउँ, छिमेक, वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्लामा आएको बिकास निर्माणको काममा स्थानियहरुले कडा प्रत्यक्ष निगरानी राख्नुपर्दछ । सो बिकास निर्माणको काम गुणस्तर भए नभएको पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा रिपोट गर्ने, गुणस्तहिन काम भए काम रोकेर गुणस्तर बनाउन लगाउने कार्य स्थानियले गर्नुपर्दछ । बर्षौै बर्षमा एक पटक आएको बिकास निर्माणको लगानीलाई सदुपयोग र उचित तरिकाले लगानी गर्दा हाम्रै जिल्लाको बिकासमा सघाउ पुग्नेछ । गुणस्तर बिकास निर्माणको काम हुनेछ ।
अब्बल बन्दै गाईघाटको महिला फुटबल
लिमचुङबुङ गाउपालिकाको च्याउउप भोक्ताको पहिलो रोजाई बन्द
सवारी दुर्घटना रोक्न ट्राफिक कडाई बन
गाईघाटमा अर्को बिकल्प खेलमैदान बन्दै
एमाले हराउन गठबन्धन सरकारका पाँच दल बलियो
फोक्सिन्टार पुल बन्द
एनआरटी छैठाँै स्थानमा उक्लियो
राधाकृष्ण मन्दिर बोक्सेको बिकासमा सबै जुट्दै
फोनिजको कसमले पोल्नेछ – अध्यक्ष थापा
Previous: फोनिजको कसमले पोल्नेछ – अध्यक्ष थापा
Next: एनआरटी छैठाँै स्थानमा उक्लियो
Copyright © 2022 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design and Developed Web House Nepal